सरकारमा सहभागी हुन जसपालाई ओलीको अफर
बैशाख ३०, २०७८
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसपालाई सरकारमा सहभागी हुन अफर गरेका छन् । बिहीबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन् ।
तर ठाकुरले भने पार्टी सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक नरहेको बताएका थिए । तर यस विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनले बताएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
जसपाले नै वैकल्पिक सरकार बनाउन इच्छा नदेखाउँदा राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको समयभित्र बहुमतको सरकार बन्न सकेको थिएन । बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि ओलीनै ठूलो पार्टीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान...
गैरजिम्मेवार प्रधानमन्त्रीका कारण नेपालीले लज्जित हु...
गण्डकीमा सांसदलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रममा ७२ करोड ...
निर्वाचन आयोग पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको जसपा उपेन्द्र याद...
हाम्रो प्रयास सबै आउनुहोस् भन्ने छ, तर माधव नेपाल धेरै पर पुगिसक्नुभयाे– प्रदीप ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता ]
असार १, २०७८
महाभारत रेञ्जमा ढुंगागिट्टी उत्खनन् गर्दा चुरेलाई असर गर्दैन : किरण पौडेल [अन्तर्वार्ता ]
जेठ २६, २०७८
संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध घात भयो, कांग्रेसले पनि गलत नजिर बसाल्यो– लक्ष्मण घिमिरे [कुराकानी]
जेठ १०, २०७८
के नेपालमा निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने समय आएको हो ?
११ महिनामा जम्मा ७ घण्टा काम : संकटको समयमा खोइ माथिल्लो सदनको भूमिका ?
जेठ ३०, २०७८
डिल्लीबजार कारागारमा दीपक मनाङेसँग ती दुई घण्टा...
वैद्यको भनाइ अक्षम्य र आपराधिक, बर्खास्त गरेर कडा कारवाही गर
जेठ २९, २०७८
बजेटको सन्देश : महामारीको घाउमा मलम, अर्थमन्त्री अर्को परीक्षामा पनि उत्तीर्ण
जेठ १६, २०७८
लोकान्तर छैटौं वर्षमा : महासंकटको कष्टपूर्ण यात्रामा पनि विचलित हुनेछैनौं
बैशाख २४, २०७८
सांसदलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम बागमतीमा खारेज, सुदूरपश्चिममा कायमै
सिन्धुपाल्चोकमा भीषण बाढी, कम्तीमा ६ जना बेपत्ता
यस्ता छन् मेथीका फाइदै फाइदा
आलुभन्दा बढी लाभदायक छ यसको बोक्रा
क्याप्सुलको रंग किन हुन्छ दुईथरी ?
यो दुई मिनेटको नियमले तपाईंको जीवन परिवर्तन गरिदिनेछ !
मरेका प्यारा मान्छे सपनामा आए भने के अर्थ लाग्छ ?
सिन्धुपाल्चोकको तिपेनी बजारमा बाढी पस्यो
निषेधाज्ञा केही खुकुलोपछि कालीमाटी तरकारी बजार